Trump iyo Soomaaliya - Khaladaadka uu Trump ka aaminsan yahay Soomaaliya - Tilmaan Media
in CAALAMKA, QORMO
Warqadaha taxanaha ah ee Saxafiyiinta Afrika, waxaan ku qaadaneynaa middan uu qoray Ismaaciil Ceynashe oo eegaya sida Soomaaliya ay bartamaha ugu gashay ololaha doorashada Mareykanka.
Madaxweyne Donald Trump ayaa gabadha ka tirsan Congress-ka dalkaas ee asalkeedu Soomaalida yahay wuxuu ka dhigay mid ka mid ah dumarka uu ololaha u adeegsanayo si dib loogu soo doorto doorashada bisha November ee sannadkan – iyo si dadban dalka ay ku dhalatay ee Soomaaliya.
Weerarradiisii dhowaanahan ee uu ka sheegay ololihiisii Tulsa iyo Oklahoma, wuxuu gabadhan, 37 sano jirka ah, ku eedeeyay in ay dooneyso in “qalalaasaha” Soomaaliya ay keento Mareykanka.
“Waxay jeclaan lahayd in dowladda dalkeena ay la mid dhigto midda wadankii ay ka timid – Soomaaliya. Dowlad la’aan, amni la’aan, booliis la’aan, waxba kama jiraan, waa dagaallo uun. Haddana waxay inoo sheegeysaa sida dowlad looga shaqeysiiyo. Maya, waad mahadsan tahay.”
Ilahn Cumar, oo Mareykanka tagtay iyadoo yar oo qaxooti ah, sannadkii 1995-tii, waa xildhibaannada matasha gobolka Minnesota, oo magaalada Minneapolis ay ka tirsan tahay halkaas oo ah meesha lagu dilay ninkii madowga ahaa George Floyd, bishii May.
Dilkaas waxaa ka dhashay ololaha iyo dibadbaxyada hal ku dhigga looga dhigay Nolosha Dadka Madowga ah Qiimo ayey leedahay.
Balse madaxweyne Trump ayaa doorbiday in ololihiisii Tulsa uu diiradda ku saaro meesha ay asal ahaan ka soo jeedo Ilhaan Cumar, waxaana suuragal ah inuu marin habaabinayo dhammaan qalalaasaha iyo rabshadaha agtiisa ka dhacayay.
Iyadoo taa ka jawaabeysa Ilhaan Cumar waxay sheegtay in hadalkiisa uu yahay “cunsuriyad”. Waxay intaa ku dartay in caradiisa ay ka dhalatay natiijada afti dhowaan la baahiyay oo muujisay in musharraxa ay loolamayaan ee Dimuquraadiga, Joe Biden, uu kaga sareeyo codeynta gobolkeeda, halkaas oo ay deggan yihiin bulsho Soomaali oo aad u badan.
Madaxweynaha wuxuu Ilhaan ku tilmaamay qof “uu naceyb ka buuxo oo ah dhibaatada hanti-wadaagga Mareykanka”, Wuxuuna ka digayay in dalka ay bedeleyso haddii Biden uu ku guuleysto xilka madaxweynaha.
Waxaase xaqiiqo ah in Ilhaan iyo Biden ay kala taagan yihiin laba dhinac oo iska soo horjeeda oo Dimuquraadiga ka mid ah – Ilhaan waxay si weyn u taageereysay Bernie Sanders inuu ku guuleysto tikitka tartanka ee Dimuquraadiga.
Balse, hadalladaas dhankiisa door ayey ku leeyihiin, waxayna u tahay in doorashada loo saldhigo, iyo codeynta – ayna Ilhaan iyo Soomaaliya ay eeganayaan door fiican.
Xaqiiqdii, labaduba waxay dood kulul dhex martay sannadkii tagay iyadoo kullankii Trump ee North Carolina, ay dadkii ka qeybgalay ku qeylinayeen waxyaabo ku saabsan Ilhaan sida: “Dib u celi! dib u celi!”
Waxay dib u soo nooleysay hadalkii ahaa “iyada xir” oo ah hal ku dhig ay taageerayaashiisa ka sameeyeen musharixii ay ku tartameen doorashadii 2016-kii, Hillary Clinton.
Ilhaan Cumar, oo si weyn u dhalleeceysa madaxweynaha, waxay mar la kulantay caqabad – waxaa eeganayay Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga, labaduba – taas oo ka dhalatay hadallo ay ka sheegtay Yuhuuda, waxayna raali gelin ka bixisay farriimaha Twitter-ka ee ahaa in taageerada Xildhibaannada Mareykanka ay la xiriirto lacagta ololaha.
Sanatar ka tirsan Jamhuuriga, Rand Paul, wuxuu sheegay inuu tikitka diyaaradda ee Soomaaliya ka bixinayo Ilhaan Cumar oo uu ku sheegay “in ay qof qof aan abaal lahayn”.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tirsanaan jiray xisbiga Jamhuuriga
Waxay u muuqataa in aragtida Trump uu ka qabo Soomaaliya ay weli ku xiran tahay markii xilka laga tuuray Maxamed Siyaad Barre, sannadkii 1991. Markaas ka dib Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dalka ugu fashil badan caalamka.
Aragtidaas ayuu si khaldan oo aan ka fiirsasho lahayn u aaminsan yahay iyadoo xitaa dalka xaaladdiisa ay soo hagaageyso.
Trump wuxuu mala-awaalayaa in Soomaaliya aysan ka jirin sharci iyo kala dambeyn, boolis iyo dowlad la’aan, haddaba taas waxay aad uga fog tahay xaqiiqada.
Dowlad ay Qaramada Midoobeey taageereyso ayaa tallaabooyiin yaryar oo dib u dhis ah ka sameyneyso dalka, waxayna ka hor tageysaa Al-Shabaab – iyadoo dad badan oo qurba joog ah ay dalka dib ugu noqonayaan si dib u dhiska ay gacan uga geystaan.
Dowladahaas soo maray dalka ee isbedellada sameynaya waxaa ka mid ah midda uu hadda hoggaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaas oo xubin ka ahaan jiray xafiiska xisbiga Jamhuuriga ee Buffalo, wuxuuna iska celiyay shaircigii dhalasho ee Mareykanka uu ka haystay. Wuxuuna xilka hayaan tan iyo horraantii 2017-kii.
Jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland na waxayn soo qabatay doorashooyiin xaq iyo xalaal ah – in kastoo aan la aqoonsanayn, haddana waa dimuquraadiyadda ugu adag ee Geeska Afrika.
Waxaa suuragal ah in aragtida Trump iyo taageerayaashiisa ay Soomaaliya ka qabaan ay weli tahay mid ku saleysan wixii dhacay sannadkii 1993-dii – mid ka mid ah dhacdooyiinkii ugu muhiimsanaa ee faragelinta Afrika ee Mareykanka ayey ahayd, xilligaas oo askartii Mareykanka ay Muqdisho ka billaabeen howlgal dhibaato ku dhammaaday. Waxay doonayeen in ay soo qabtaan dagaal ooge awood lahaa.
Laba diyaaradood oo ah nooca Black Hawk ee Mareykanka ayaa la soo riday, waxaana dagaalkaas ku dhimatay 18 askeri oo Mareykan ah iyo qiyaas ahaan 500 oo qof oo Soomaali ah.
Muuqaallada laga duubay askartii maydkooda oo jidadka lagu jiidayay ayaa argagax ku abuuray shacabka Mareykanka, waxayna saameyn muhiim ah ku yeesheen siyaasadda dibadda Mareykanka gaar ahaa gobolka Bariga Afrika.
Balse, Maamulka madaxweyne Trump wuxuu sameeyaa dagaal qarsoodi ah oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya, waxayna ciidankiisa adeegsadaan diyaaradaha aanu duuliyaha saarnayn ee drone-ka iyo askar si gaar ah u tababaran, waana arrin ay dad yar oo Mareykan ah ogyihiin.
Qaar ka mid ah Soomaalida waxay aragtida Trump ee dalkooda u arkaan mid aan sal lahayn, waxayna ku doodayaan in shuruucdiisa ay dalka ka dhigeen meel aad halis u ah – waxayna sheegayaan in shacabka ay markasta dhibaato ka soo gaarto duqeynta ay drones-ka Mareykanka geysteen Soomaaliya intuu uu xilka hayay Trump.
Muslim ku faraxsan xirashada xijaabka
Dowladdii dhexe ee Soomaaliya waxay burburtay muddo hadda laga joogo 30 sano ku dhowaad, dadkiina waxay u kala qexeen daafaha caalamka – laga soo billaabo cirifka illaa New Zealand.
Mareykanka gudihiisa, Soomaalida ugu badan waxay deggan yihiin Minneapolis oo hoy u ah qurbajoogta Soomaalida ah ee ugu badan caalamka – waa meel ay ka muuqdaan Muslimiin iyo dad madow ah.
Tan iyo wixii ka dhambeeyay weerraradii 9/11 ee Al-Qacidda ku qaaday Mareykanka, waxay dood adag ka taagnayd kaalinta Muslimiinta ee Mareykanka.
Trump wuxuu markasta adeegsadaa hadallo ka dhan ah Muslimiinta isagoo ka dhigaya dad soo galooti ah oo xun, wuxuuna adeegsadaa cabsida noocaas ah.
Marka la eego Madaxweyne Trump, wuxuu Ilhaan Cumar u arkaan in aysan ka mid ahayn “qaxootiga fiican”. Gabadhan oo sheegtay in ay ku faraxsan tahay xirashada Xijaabka, waxay u dagaallantay xaqa ay u leedahay in ay timaheeda qariso marka ay ku sugan tahay Aqalka Wakiillada, taas oo meesha ka saartay xannibaad soo jirtay 181 sano.
Iyadoo ololaha doorashada Mareykanka uu si rasmi u sii xoogeysan doono, shanta bilood ee soo socota, waxaad filan kartaa in dagaalka afka ah ee arrinta la xiriira uu ku sii xoogeysto kulamada waaweyn ee Trump uu u qaban doono taageerayaashiisa.